तपाईंलाई थाहा छ ज्वानोका यी अद्भूत फाइदा ?
मौसम परिवर्तनको बेला हुने संक्रमणले मानिसहरू अनेक खालका मौसमी रोगबाट पीडित छन् । यस्तोमा राम्रोसँग तरकारीमा ज्वानोको प्रयोग गर्ने हो भने या औषधिकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो जीवन स्वस्थ्य रहनेछ ।
भान्छामा सहजै पाइने ज्वानो एक प्रकारको औषधि हो । ज्वानोलाई पेट दुखेको औषधिका रूपमा बढी चर्चा गरिन्छ । पेट दुखेको बेला ज्वानोको दाना चपाएर खाए पेट दुखेको निको हुन्छ । ज्वानोको गेडामात्र नभएर तेल, फूल र बोटबिरुवालाई समेत विभिन्न रोगमा औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । मसिना किराहरूलाई घरबाट भगाउन समेत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । कानको दर्द, दाँतको दुखाइ र रुघाखोकी, मुटुका समस्या, जोर्नीका समस्या र नाक बन्द हुँदा समेत यो अति प्रभावकारी हुन्छ ।
के–के छन् ज्वानोका फाइदा ?
पेट दुखाइमा ज्वानो : ज्वानोमा रक्सीमा हुने समेत गुण भएकाले पेट दुखेको बेला प्रयोग गर्दा तत्काल लाभ हुन्छ । मनतातो पानीमा अलिकति ज्वानो थोरै नुन हालेर खाएमा पेटमा भएको अपच ठीक भएर जान्छ । खानासँगै त्यत्तिकै ज्वानो खाँदा पनि फरक पर्दैन ।
सर्दीमा ज्वानो : सर्दी अथवा रुघाघोकीमा ज्वानो अमृततुल्य हुन्छ । १५ देखि २० दिनसम्म लगातार भुटेको ज्वानो २ ग्राम जति खाने हो भने ठीक हुन्छ । मनतातो पानीसँगै ज्वानो चपाएर खाँदा खोकी लागेको बेला फाइदा गर्छ ।
दममा ज्वानो : दम रोग लागेकोमा ज्वानोको धुवाँ लिँदा श्वास फेर्न सहज बनाउँछ । ज्वानो र सखर मिलाएर दैनिक खाने हो भने दम रोगलाई निकै फाइदा पुर्‍याउँछ ।
मधुमेहमा ज्वानो : १ चम्चा ज्वानोको दाना र ४ चम्चा बेलपातको जुस दिनको दुईदेखि तीनचोटी खाँदा मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ ।
रक्सी छुटाउन : ज्वानो प्रयोग गरेर बनाइएको ‘काँढापानी’ प्रत्येक रात सुत्नेबेला ३० मिलिलिटर करीब ५० दिनसम्म सेवन गर्ने हो भने यसले रक्सी अम्मली हटाउन सहयोग गर्छ ।
हैजामा ज्वानो : हैजाका कारक किटाणुहरूलाई मार्नमा ज्वानो सहायक हुने भएकाले हैजामा ज्वानो सेवनको सल्लाह दिइन्छ ।
मृगौलामा हुने पत्थरीमा ज्वानो : ज्वानो, मह र चुक अमिलो सम्मिश्रण नियमित १० दिनसम्म प्रयोग गर्ने हो भने यसले मृगौलाको पत्थरीलाई गलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
तौल घटाउनमा ज्वानो : ज्वानोमा पेटमा भएका धेरै रोगलाई हटाउने सामर्थ्य छ । यसले दिसा खलास बनाउँछ र तपाईंको तौल घटाउनमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।
पेट फुल्ने रोग र वायुविकारमा ज्वानो : वायुविकार र पेट फुल्ने रोगमा जादुगरी औषधि हो ज्वानो । ज्वानो उमालेर त्यसको बाफ लिने हो भने उल्लिखित रोगहरूमा धेरै नै लाभ हुन्छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले एसटूएमको सेलेक्ट सिस्टम ईएफटी स्वीच प्रयोगमा ल्याउने
बढ्दो चिसोमा नेकपा तताउन खोज्दै प्रचण्ड - के छ भित्री रणनीति ?
एन्ड्रिजले ग्राहकसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मनायो सेवाग्राही दिवस